TRUESTORY: ဒေးဗစ်အိုဘားမား ဖွင့်ချပြောဆိုလိုက်တဲ့ မြန်မာပြည်ကိုရောင်းစားပြီး ကုလားအရေး လုပ်စားနေသူများ စာရင်း
ဒေးဗစ်အိုဘားမား ဖွင့်ချပြောဆိုလိုက်တဲ့ မြန်မာပြည်ကိုရောင်းစားပြီး ကုလားအရေး လုပ်စားနေသူများ စာရင်း
From : http://www.mgkyautkhae.blogspot.com/2013/02/blog-post_2594.html
ပြီးခဲ့တဲ့၂၀၁၂-ခုနှစ်ဇွန်လ ဘင်္ဂါလီ ဆူပူမှုဖြစ်ခါစလောက်က (တိတိကျကျ ပြောရရင် ၂၀၁၂-ခုနှစ် ဇွန်လ၂၁ရက် နေ့စွဲ နဲ့) ဒေးဗစ်အိုဘားမား (David Obama) ဆိုသူ ဗြိတိသျှနွယ်ဖွား အမေရိကန် လူမျိုး တစ်ယောက် ရေးတဲ့ “A friend’s appeal to Britain and United States” ဆောင်းပါး ထဲကကောက်နှုတ်ချက်အချို့ကို အောက်မှာဘာသာပြန်ထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ကို ကုလားတွေ ဆီမှာ ရောင်းစားပြီးတော့ ဘဏ္ဍာငွေရှာကြသူတွေထဲမှာ ဘယ်သူ တွေ ပါနေကြသလဲ ဆိုတာကို အဲသည်ဆောင်းပါးရဲ့ အောက်ပါအပိုင်းမှာ စာရင်းချပြ ထားတယ်။
“တစ်လိမ် နှစ်လိမ် ပွေလိမ်ရှုပ်တယ်၊ လူလိမ်ကြီးပေါ့ကွယ်၊ ပျိုပျိုမေကို မချစ်ပါဘဲနဲ့ ယုံအောင် ချွဲတတ်တယ်”ဆိုတဲ့သီချင်းစာသားနဲ့အညီကျွန်မတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်ခင်သူအပေါင်းအား အောက် ပါ စာရင်းတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဒေးဗစ် အိုဘားမား ရေးသားသည်။
ကျွန်တော် ပထမဆုံး ဆွဲထုတ်ပြရမယ့်သူကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး သမ္မတ စ၀်ရွှေသိုက် ရဲ့ သား ဟန်ညောင်ဝေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်ညောင်ဝေဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပိုက်ဆံနဲ့ရောင်းစား လို့ ရအောင်ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့မှာ The Euro-Burma Office (EBO) ဆိုတာကို တည်ထောင် ထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ)ဆိုသူတွေအရေး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြပ်အတည်းဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရာမှာတာဝန်အရှိဆုံးလူတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အာရပ်လူမျိုးဘဏ္ဍာငွေ ထောက်ပံ့သူတွေကို သူ့ဘက်က ဘယ်လိုအာမခံထားသလဲ ဆိုတော့ တကယ်လို့များ သူဟာ ဘင်္ဂါလီ ကုလားတွေကို ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ဌာနေတိုင်းရင်းသားထဲမှာ စာရင်းပေါက်အောင် မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် သူ့ကိုယ်သူ သတ်သေမယ် လို့ အာမခံထားတယ် လို့တောင် ဆိုကြပါတယ်။
ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဖြစ်ပါတယ်။ဦးနုဟာအာဏာ ကိုဖက်တွယ်နိုင်ဖို့ အလို့ငှာ မဆိုစလောက်မဲပြား လေးငါးခြောက်ပြား ရဖို့ အတွက် ယခုထက် တိုင် အငြင်းပွားရတဲ့ “ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သုံးစွဲခဲ့သူဖြစ်တယ်။ သူဒီလိုလုပ်ခဲ့လို့ ဒီနေ့ထက် ထိ ဖြေရှင်းလို့ မပြီးနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။ (အခု ဇွန်လ အရေးအခင်းက စပြီး) ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားဟောင်း တွေက ရဲရင့်ပြတ်သားတဲ့ ဦးဆောင်မှု နဲ့ အမျိုးသားရေးရပ် တည်ချက်နဲ့ ကုလားတွေရဲ့ အလိမ်အညာ သမိုင်းပုံပြင်တွေ ကို တိုက်ဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့အခါကျမှ ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီ တွေရဲ့ ရိုင်းစိုင်းယုတ်မာရက်စက်မှုတွေ ၊ အစ္စလမ္မစ်အစွန်းရောက် လှုပ်ရှားမှုတွေ နဲ့ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ဗူးပေါ်သလို ပေါ်ထွက် လာခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး သမ္မတ စ၀်ရွှေသိုက်ရဲ့သား ဟန်ညောင်ဝေဟာ ဖရန်စစ်ဝေးဒ် (Francis Wade) ဆိုတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ကို ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီတွေအတွက် မီဒီယာဝါဒဖြန့်ချိရေး အလို့ငှာ ခန့် အပ် စေခိုင်းထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဟန်ညောင်ဝေဟာ (သူဦးဆောင်နေတဲ့) ဒီဗွီဘီ (DVB) သတင်း ဌာနကို ၀ါဒဖြန့်ချိရေးလက်နက်အဖြစ် အသုံးချပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တောက်လျှောက် အကြပ် အတည်းထဲမှာရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီတွေအရေးလည်းအပါအ၀င် ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ တောက်လျှောက် ကမ္ဘာက သိလာမြင်လာအောင် လုပ်နေခဲ့ လုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်။
အဲ . . . ၊ အမေရိက က ဇာတ်လိုက်ကျော်တွေဖြစ်တဲ့ အောင်ဒင် နဲ့ သူ့ရဲ့ US Campaign for Burma (USCB) ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟာ မြန်မာပြည်ကို ပိုက်ဆံနဲ့ ရောင်းစားနေပါတယ်။ ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ လူဆိုးလူယုတ်မာတွေဖြစ်ပြီးတော့ ရိုဟင်ဂျာ ကုလားဘင်္ဂါလီတွေဟာ မတရားခံကြရသူတွေပမာ ပုံဖော်ခြင်းအားဖြင့် ရခိုင်ပြည်ကို သစ္စာဖောက်ပါတယ်။ တကယ့် လက်တွေ့ အမှန်တရားကတော့ သူတို့ပြောနေတာနဲ့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်။
ယူကေ (ဗြိတိန်) မှာ ဆိုရင်၊ ဘားမားကန်ပိန်းယူကေ (Burma Campaign UK) က မာ့ခ် ဖာမာနာ (Mark Farmaner) နဲ့ သူ့ရဲ့ ဒုတိယဇနီး ဇိုယာဖန် (Zoya Phan) တို့ဟာ အခကြေးငွေ ရယူပြီး သကာလ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂါလီတွေအတွက် ကျားကုတ်ကျားခဲ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး လုပ်နေပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာ သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ရည်းစား (boyfriend) ဖြစ်တော် မူသော ဘန်နီဒစ်ရောဂျားစ် (Benedict Rogers) ဆိုသူကတော့ ဘာမားကန်ပိန်းယူကေ က ဘယ်လိုအလိမ်အညာတွေ ပြောပြော ဘယ်လို ကိုယ်ကိုယ်ကို ဂုဏ်တင်တာမျိုးလုပ်လုပ် တစ်သဝေ မတိမ်း ပုံတူကူး သံယောင်လိုက် ပေးပါတယ်။ သူတို့လင်မယားရဲ့ ရည်းစား ဘန်နီဒစ်ရောဂျားစ် အလုပ်လုပ်တဲ့ အဖွဲ့ကတော့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခရစ်ယန် သွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (Christian Solidarity Worldwide) လို့ အမည်ခံထား ပါတယ်။ ကျက်သရေမရှိတဲ့ မောင်ဇာနီ (Maung Zar Ni) ဟာ ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီတွေကို သူ့သမီးကို ပေးထားရတဲ့ သူ့သမက်တွေ ပမာ ထော ပနာပြု အကာအကွယ်ပေး အရောင်းမြှင့်တင်ရေး လုပ်နေပါ တယ်။
နောက်တစ်ဖန်၊ ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ်မှာ Forum for Democracy in Burma (FDB) အမည်ခံအဖွဲ့က စိုးအောင် နဲ့ နိုင်အောင် ဆိုသူတွေရှိကြပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ တန်းတူညီမျှမှု ဆိုတဲ့ ခေါင်း စဉ်တွေအောက်က ပေးတဲ့ ရံပုံငွေတွေကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် စိုးအောင် နဲ့ နိုင်အောင် တို့ဟာ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီတွေအရေးကို ထောက်ခံလုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။
အာဆီယံ အခန်းကဏ္ဍ နဲ့ ပတ်သက်လာရင် စိုးအောင်ရဲ့မိန်းမ မလေးရှားတရုတ်မ ဒက်ဘီ စတော့ဟာ့ဒ် (Debbie Stothard) ဆိုတာရှိတယ်။ မြန်မာပြည်နဲပပတ်သက်လာရင် နကန်း တစ်လုံးမှ မသိတဲ့ ဒက်ဘီ စတော့ဟာ့ဒ်ကတော့ ALSEAN အမည်ခံထားတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ကိုယ်စားပြုပြီး သကာလ ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီတွေအရေးကို မမြင်မကန်းနဲ့ အာဘောင်အာရင်း သန်သန် အော်နေ ဟစ်နေပါတယ်။ အဲသည် ALSEAN ဆိုတဲ့အဖွဲ့မှာ သူမရယ်၊ နောက်ပြီး တော့ သူမရယ် . . . ဒါပဲ ပါတယ်။ သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ ကြိုးကိုင်တဲ့ ဘော့စ် ကတော့ ဘားမားကန်ပိန်း ယူကေ(BCUK) က မာ့ခ် ဖာမာနာ ဖြစ်ပြီးတော့၊ BCUK မှာ ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် BCUK ရဲ့ ဘော့စ် ကတော့ Arakan Project ဆိုတဲ့အဖွဲ့က ခရစ်စ်လျူဝါ (Chris Lewa) ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
ကဲ...၊ ဒီလောက်ဆိုရင် မြန်မာပြည်ကို အစ္စလမ်ဇာတ်သွင်းပြီး ကိုလိုနီပြုဖို့ အတွက် ဘယ်သူ ဘယ်ဝါတွေ က ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းပြီး ဘယ်လိုအကွက်ချ လုပ်ဆောင်နေကြ တယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်သာလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။
မြေပုံကို ချခင်းပြီး စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုလုံးကို လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ (ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ) နိုင်ငံမဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေ အရေးလှုပ်ရှားသူများ အားလုံးရဲ့ အခေါင်အချုပ်ကြီးကတော့ Arakan Project ရဲ့ ဒါရိုက် တာ ခရစ်စ်လျူဝါ (Chris Lewa) ဖြစ်နေပါတယ်။ ခရစ်စ်လျူဝါ ဟာ နိုင်ငံမဲ့ နဲ့ ခိုးဝင်ဘင်္ဂါ လီတွေ အရေးအတွက် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အရေးဆို လော်ဘီလုပ် လာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည် ရခိုင်ပရောဂျက် (Arakan Project) အမည်ခံအဖွဲ့အတွက် ရံပုံငွေတွေကို ခရစ်စ်လျူဝါ တစ်ယောက် ရှာခဲ့ ရှာဆဲဖြစ်သော်ငြားလည်း ခရစ်စ်လျူဝါဟာ Arakan Project နာမည်အောက်မှာ ရခိုင် (၀ါ) Arakanese လူမျိုးတွေအတွက် ဘာမှ လုပ်မပေးဖူးဘဲ၊ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ခိုးဝင် နဲ့ နိုင်ငံမဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေအတွက်ပဲ တောက်လျှောက် လုပ်ပေးလာခဲ့ကြတယ်။ လောကကြီးဟာ အင်မတန်မှ တရားကျဖွယ် စိတ်ဓါတ်ကျဖွယ် ကောင်းလှပါတော့တယ်။
(Coral Arakan News အတွက် ယုသန္တာခင် ဘာသာပြန်သည်။)
(အယ်ဒီတာ့မှတ်စု။။မူရင်းစာရေးသူ ဒေးဗစ်အိုဘားမား ဖော်ပြခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနုကတော့ ကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ၈၈ ကျောင်းသား ဦးမြအေးရဲ့ သမီး ဝေနှင်းပွင့်သုန် တစ်ယောက် ဒီစာရင်းမှာ စာရင်းမပေါက်သေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အောက်မှာ ဆောင်းပါးရဲ့ မူရင်းစာသားကို ဖော်ပြထားပြီး၊ ဆောင်းပါး တစ်ခုလုံးကို ဖတ်ရှုနိုင်တဲ့နေရာကို အောက်ဆုံးမှာ လင့်ခ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးအပိုင်းကလေးမှာ ပါရှိတာတွေဟာ မူရင်းစာရေးသူရဲ့ အာဘော်သာဖြစ်ပြီး ယုသန္တာခင်ဟာ ဘာသာပြန်သူ သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။)
I would like to highlight here that the son of the first President of Burma Sao Shwe Thaike, Harn Yaung Wai, established The Euro-Burma Office (EBO) in Brussels to sell Burma for money. He is one of the most responsible persons bringing alien Rohingya Bengali into Burma crisis. He had pledged to his Arab funders that if he cannot do Rohingya to belong to the Burma indigenous races, then he won’t live anymore and commit suicide.”
Burma’s first Prime Minister U Nu, who used the disputed term ‘Rohingya,’ in return forafew votes for his cling into power betrayed Burma creating long-time unresolved problems. It was only when 88-Generation Students Leaders take leading role, driven aliens Rohingya fake histories lies with their brave leadership and nationalist stand, that so-called Bengali Rohingya are exposed of with their barbaric cruelties, Islamic extremism and radical terrorism.
In Europe, the son of the first President Sao Shwe Thaike, Harn Yaung Wai, is promoting Rohingya Bengali terrorists as if part of Burma crisis by using his DVB news media asapropaganda tool in addition to appointingastory writer named Francis Wade for doing media propaganda for so-called Rohingya Bengali.
In ASEAN, Soe Aung’s wife, Debbie Stothard,aMalaysian Chinese who knows nothing about Burma is blindly shouting for Rohingya by representingagroup called ALSEAN comprising of her and Arrr herself. Their boss is Mark Farmaner of Burma Campaign UK (BCUK) and BCUK boss on Rohingya issue is Chris Lewa of Arakan Project. You can see clearly that this is coordinated and planned plot to colonise and Islamise Burma.
In reality, the BOSS of all Rohingya campaigners is Chris Lewa, the Director at the Arakan Project who has been lobbying for so-called Rohingya for decades. Even though Chris Lewa is seeking funding with the Arakan Project but that person has never ever been working for Arakan people but been working for Rohingya people under the name Arakan Project. This is depressing, isn’t it?
Posted by Gentle Men at 9:20 AM